Seyga cusub ee Ilhan Cumar wuxuu qaatay diinta Islaamka” – All Hadaaftimo Warar Sugan o Run ah
Seyga cusub ee Ilhan Cumar wuxuu qaatay diinta Islaamka”
Allhadaaftimo March 14, 2020 Uncategorized
Waxaa maalma kahor dalka Mareykanka ku aqal gashay xildhibaan Ilhaan Cumar oo katirsan aqalka Congress-ka Mareykanka, lagana soo doorta Minnesota.
Afhayeen u hadlay Ilhan Cumar oo lagu magacaabo Jeremy Slevin ayaa BBC-da u xaqiijiyay in Tim Mynett uu qaatay diinta Islaamka.
“Waxaan kuu xaqiijinayaa in ay isku guursadeen hab waafaqasan diinta Islaamka iyo sharciga, seyga Ilhan na uu qaatay diinta Islaamka”, ayuu yiri Jeremy oo la hadlay BBC-da.
Jeremy ayaa ka gaabsaday in uu BBC-da la wadaago haddii uu jiro magaca uu la baxay seyga cusub ee Ilhan Cumar iyo xilliga uu qaatay diinta Islaamka.
Xiriirka haasaawe ee Ilhan Cumar iyo Mynett ayaa soo shaac baxay sanadkii la soo dhaafay kadib markii xaaska ay wadajoogeen Mynet, oo lagu magacaabo Beth Mynett oo 55 sano jir ah ay dalbatay furriin. Mynet ayaa haatan Ilhan Cumar u qaabilsan dhanka ololaha doorashada
Lahaanshaha sawirkaILHAN OMAR
Previous Magaalada Garoowe waxaa soo gaaray wafdi iskugu jira wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan Dawladda Federaalka
Next Dowlada Kenya Oo Eedayn Cusub U Jeedisay Dawlada Fadaraalka Ah Ee Soomaaliya